Irina Melnik wazalwa March 30 kuyi Fastov (Ukraine) Kiev esifundeni ngo-1962. Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, wafika eMoscow futhi engena eMoscow Art Theatre School.
Isifundo kanye nomsebenzi (indima, izithombe)
Ngo umqondisi 1981 Konstantin Yershov Irina ababemenyelwe indima uJenny e ifilimu "Abesifazane ihlaya sina." Eqondiswa eqoqwe amanoveli ezintathu, okuyinto lebhokisi Monologue protagonist, indaba ngothando lwakhe lokuqala. Ngemva kunesimo sengqondo kabalandaba Gene amantombazane Boris esaphila ebuka ezinye abesifazane isithombe sakhe.
Ngo-1983, u-Irina Melnik, isithombe okumelelwe okungenhla iziqu ngempumelelo enkambweni Umculi ahlonishwe we RSFSR VK Manyukova. Ekubuyeleni kwakhe e-ukusebenza Kiev studio kubo. Dovzhenko, studio yaseshashalazini umlingisi.
Kufeza indima wokuqala (1987) e production odumile "Babi Yar" - intombazane Miriam.
1985 kwaphawulwa umdlali waseshashalazini e indima le nobuqhawe ezimbili ifilimu "feat Odessa." Isisekelo ifilimu babe imithombo documentary ekhuluma ukuvikelwa nobuqhawe Odessa oda Amathenda siphumele Sevastopol. Irina Melnik udlala umhlengikazi othobekile uTanya uthandana protagonist.
Futhi ngo-1987, kwathina siqondiswa yilowo uJaroslav Lupy umema actress leduna libe nendima ifilimu zomlando "UDaniyeli -. Prince Galitsky"
Umfelokazi iphoyisa wabulala Irina Melnik udlala ifilimu "izikhali Siqu" (1991). edolobheni wesifundazwe scares induna ukufika amaphoyisa Lyubov Virtanen. Weza ukuqonda ukubulala ongavamile iphoyisa.
Ngo-1995 yena wadlala indima cameo e engqondweni esibhedlela nesineke umqondisi uJaroslav Lupy. Isithombe sigcinwa nge-ngokuthi "Score phezu lethuna."
Ngo sehlelo Soviet ifilimu "Izinhliziyo Three" (1992) iqondiswe Vladimira Popkova actress ethile yafeza indima Mercedes. Le filimu esuswa yonke yalo mdlalo webhayisikobho uJack London mayelana uhambo romantic futhi ubungane beqiniso.
Ngo-2001, u-Irina ukuba ayosebenza e Kiev Theatre ngebhange kwesokunxele Dnieper.
Ngo-2002, Melnik Irina Vasilevna linendima ezithakazelisayo Russian TV ewuchungechunge "logic yabesifazane". Njengoba wazi, ke - thuluzi ekahle uphenyo. Tumanov, umma umhlalaphansi, kulula ukufakazela e chungechunge ngamunye. Isithombe yokuphumula, kudlalwa Irina, okuthusayo ngamagama alula uma ukhululeka usho okudingayo.
indima Heavy zalowo mahluleli wembula ithalenta Irina ukujula ngenkathi kuqala, uchungechunge studio "Motor - ifilimu". "Ummeli" Uhlale uya edelela protagonist - ummeli, ukukusingatha kuphela amacala obugebengu, elingapheliko ngokwethembeka romantic. Enqoba amacala ngisho ezingenathemba.
Izintandokazi show kakhulu baseRussia - "Ukubuya Mukhtar". Ochwepheshe of komthetho ezinesibopho intandokazi wonke umnyango aphenya esinye ubugebengu, ngokungazelelwe bebhekene umbhuli, yena ngempumelelo kudlalwa actress.
"Ubufakazi bezimo" - ifilimu ngobugebengu. Abaphenyi usola e ukwenza umbhali, owachaza ubugebengu kakhulu encwadini yakhe. Izimfihlo ukuthi zinengxenye umphenyi ebhaliwe, unganikeli ukuphuma kumbhali. Iyiphi indima izodlala ekuphileni kwakhe Karina - Heroine Irina Melnik?
Ngo-2008 inkampani "Star Media" eyakhishwa ngo iqashwe movie "Troop" (2008). Uzungu kuboshelwe izenzakalo zosuku lwethu. Ngo kude, isigodi cishe eyihlane elahlekile indodakazi umbusi endaweni futhi ezimbili umngane wakhe. Ubaba wentombazane uneminyaka icela usizo Wezangaphakathi uMajor General, kodwa akavumelani ukugcwalisa izithembiso zakhe. Ngemva kwalokho ubaba wathumela ukuze useshe intombazane nabangani (amaphoyisa lamabutho). Ride kanzima. Kodwa umama wentombazane (adlalwa Irina Melnik) liziphatha ngokungajwayelekile.
Iqembu izinkampani, nokususa melodrama ochungechungeni eziningana ngaphansi kwesihloko esithi "Udokotela Weqolo", u-Irina ababemenyelwe sifeze indima yokuba inhloko umhlengikazi. Udokotela nesimo esinzima - umlingiswa oyinhloko wale movie. Waphulukiswa indodana ngendlela engenathemba ogulayo kukasomabhizinisi (umnikazi imitholampilo esibizayo), ekade ikhwela kulo nelifakwe isimemo sakhe eMoscow. Kufanele babe kwenhloko yomnyango. abaphezulu umhlengikazi reception hhayi kakhulu kusimangaze-ke.
Le filimu wadedelwa ngo-2011 ekukhanyeni "Imithi ugogo." Irina Melnik - umdlali waseshashalazini e ifilimu we plan yesibili. Yena udlala umngane kamama engcono protagonist, igama lakhe akuyona ngisho credits.
Ngawo lowo nyaka kufika ifilimu "Honey Love". Luba intombazane, wakhulela uyisemkhulu, a ngqo futhi iziphethe kahle. Umkhulu wanikela ukuphila kwakhe izinyosi, futhi-ke, umzukulu ngofuzo mkhakha. Ukuhlala emzaneni nge izisekelo zayo ezindala, "mhlabeni" Ljuba ubukeka okungenani "ongaziwa", ukusho - uyisidala. Akukona obakhathalelayo ukubukeka, izitayela fashion e izingubo kanye zezinwele, kodwa izimiso zivame badikibale wabenza kommersantov-. Kubonakala sengathi livela kwekhulu le-19.
Kodwa-ke wabuyela emaphandleni of uVictor, joker, a handsome playboy. Kubonakala Lyuba ukuthandana ... Kodwa kuthatha "umngane" Lera. Umama sale ntombazanyana idlala Irina Melnik.
Futhi manje e-2016 iphume yeshashalazi miniseries "Asikho isakhamuzi." uhlamvu Main - umphenyi ne ingcebo yolwazi, uzama, kuze kube manje, kwanhlanga zimuka nomoya, ukubala balobu bugebengu wesabeka kuwo 'soft' isidlaliso "umbulali iphepha". Kodwa njengoba sengamukele wathola ukulimala ekhanda, uwa ku equlekile futhi "evuka" iminyaka engaphezu kwamashumi amabili. Detective uyaqaphela ukuthi konke okushintshile, futhi kuphela umbulali usagcwele amathafa. Ira Melnik udlala melancholic Anna, ugogo omunye umphenyi.
Manje uyazi ukuthi ubani lo Irina Melnik, biography wakhe echazwe esihlokweni. Siphinde sabuka movie nale actress emangalisayo.
Ukwesabeka ifilimu "I Blair Witch Project": ukubuyekezwa, abadlali
Tom Kruz: Filmography. Amabhayisikobho engcono kanye izindima engcono. Biography Toma Kruza. Unkosikazi, izingane, futhi ukuphila komuntu umlingisi odumile
Uwoyela Almond. Izibuyekezo umthengi
Indlela yokusebenzisa i- "Kaspersky 2013" usebenzisa ukhiye: imininingwane